Vabereki vaJesu Vanotizira Kuijipiti Naye | Upenyu hwaJesu
SARUDZA MUTAURO Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Isoko Japanese Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Nigerian Pidgin Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
VABEREKI VAJESU VANOTIZIRA KUIJIPITI NAYE
JOSEFA ANONOGARA NEMHURI YAKE KUNAZARETA
Josefa anomutsa Mariya achida kumuudza mashoko anoda kuti vabve vatoona zvokuita ipapo. Ngirozi yaJehovha ichangobva kuzviratidza kuna Josefa kuhope ichimuudza kuti: “Simuka, tora mwana muduku naamai vake utizire kuIjipiti, ugare ikoko kusvikira ndakuudza kuti udzoke; nokuti Herodhi ava kuda kutsvaka mwana muduku kuti amuparadze.”​—Mateu 2:13.
Josefa naMariya nemwanakomana wavo vanobva vatotiza usiku ihwohwo. Dai vangoti nonokei zvaizoipa nokuti Herodhi abva azivawo kuti vazivi venyeredzi vaya vakamubatisa pasi. Akavaudza kuti vadzoke nekwaari. Asi vakadzokera vasina kumuona. Herodhi anoguta nehasha. Sezvo achiri kuda kuuraya Jesu, anoita kuti vana vakomana vese vari muBhetrehema vari pasi pemakore maviri vaurayiwe. Makore aya anoatorera pane zvaakaudzwa nevazivi venyeredzi vakanga vabva kuMabvazuva.
Kuurayiwa kwevana ava kwakaipa zvikuru! Hatizivi hedu kuti vana vangani vakaurayiwa, asi kuchema nekuridza mhere kunoita vanaamai vacho kunozadzisa uprofita hweBhaibheri hwakataurwa nemuprofita waMwari Jeremiya.​—Jeremiya 31:15.
Pazviri kudai, Josefa naMariya vatizira kuIjipiti, uye vanoramba vachigara ikoko. Humwe usiku ngirozi yaJehovha inozozviratidza zvakare kuna Josefa kuhope. Inomuti: “Simuka, tora mwana muduku naamai vake, upinde munyika yaIsraeri, nokuti vaya vaitsvaka mweya womwana muduku vakafa.” (Mateu 2:20) Saka Josefa anobva adzokera nemhuri yake kumusha. Izvi zvinobva zvaita kuti humwe uprofita hweBhaibheri huzadziswe hwekuti Mwanakomana waMwari aizoshevedzwa kuti abude muIjipiti.​—Hosiya 11:1.
Zvinoita sekuti Josefa ari kuda kuti mhuri yake igare muJudhiya zvichida pedyo neBhetrehema kwavaigara vasati vatizira kuIjipiti. Asi anozonzwa kuti mwanakomana akaipa waHerodhi, Akerausi ndiye ava mambo weJudhiya. Mwari anonyeverazve Josefa nezvazvo kuhope. Saka Josefa nemhuri yake vanokwidza kumaodzanyemba vonogara muguta reNazareta muGarireya, kure nemuzinda wekunamata kwechiJudha. Jesu anokurira ikoko, zvobva zvazadzisa humwe uprofita hwekuti: “Iye achanzi wokuNazareta.”​—Mateu 2:23.
Mambo Herodhi anoita sei vazivi venyeredzi pavanorega kudzoka, uye Jesu anochengetedzwa sei?
Panodzoka Josefa nemhuri yake vachibva kuIjipiti, nei vasingadzokere kuBhetrehema?
Uprofita hupi hweBhaibheri hunozadziswa panguva iyi?
Jeremiya airevei paakataura kuti Rakeri aichema vanakomana vake?